Talata faha-dimy mandavan-taona – Trinitera Malagasy
Talata faha-dimy mandavan-taona
Tsy ankasa Jenezy 1,20-2,4a/Salamo 8/
Ankasa 1 Mpanjaka 8, 22-23. 27-30/Salamo 83/
Md Marka 7, 1-13
Ny fampifanarahana ny fomban-drazana sy ny kolontsaina malagasy amin’ny Evanjely dia tsy lalan-tokana azo fintinina amin’ny fampanaraham-bolontany fotsiny. Misy fomba nentim-paharazana manko tsy mifanaraka akory amin’ny Evanjely, ka tsy maintsy diovina izy ireny. Ny Evanjely tsy mahakasika ny fiainan’ny olona koa dia tsy avy amin’i Kristy, ilay Teny tonga nofo. Ny fandanjalanjana izany dia miteraka fifandirana mety hiafara amin’ny ady sy ny fisarahana aza indraindray, raha tsy mafy orina izay mampitambatra.
Ho an’ny Jody dia mizara roa izao tontolo izao: ny madio (pur) izay mitondra amin’ny fiainana ary ny maloto mila diovina raha tsy te hifatratra any amin’ny fanjakan’ny haizina sy ny fahafatesana (hadès). Araka izany dia mila manaraka amin’ny antsipirihiny ny fomba fidiovana, satria izay “maloto” dia mila sarahana amin’ny tontolo mahakasika an’Andriamanitra Velona sy ny mpino azy ary tsy afaka miverina hiombom-piainana sy hafaliana indray amin’ny mpino “madio” raha tsy efa avy midio, araka ny fomba nifandovana. Ny tsy fanarahana ireny fomba aman-dalàna ireny dia maha-voasazy ary mety haha-voaozona mihitsy aza (Jn 7, 49).
Ny mpianatr’i Jesoa dia tsy nanaraka iznay fomba izany. Tsy dia resaka fahadiovana loatra no tian-kambara eto fa ny fombafomba nentim-paharazana. Azonareo alaina sary an-tsaina izany rehefa mahita zinga mifatotra eo amin’ny paompy fanasana tanana ianao, satria tsy fomba ny manasa tanana amin’ny rano mandeha fa tsy maintsy tovozina… rehefa avy any an-tsena manko, dia mazava loatra avy nifampikasokasoka tamin’ny tsy mpino tany fa mila midio. Lazain’ny Boky Eksaody fa mila misasa tanana sy tongotra ny mpisorona rehefa miditra sy mivoaka ny tempoly sy ny tranolay fihaonana mba tsy ho faty (Eks 30, 17-21) ary tsikelikely dia lasa fahazaran’ny olona rehetra, tonga didy mila tandremana toy ny anakandriamaso mihoatra noho ny Didin’Andriamanitra.
Rehefa izay no mitranga dia zava-doza no aterany. Rehefa mahavita ny fombafomba ny olona dia mihevitra fa efa milamina ny konsiansy ka afaka mandeha am-piadanana. Diniho ohatra ny fomba fivavaka izay lasa fahazarana fotsiny ka tsy ny fifandraisana amin’Andriamanitra sy ny fikatsahana ny sitrapony intsony no mahamay fa ny fahaizana na tsia tsianjery ny vavaka ary ny fanononana azy antendro-molotra (pli-vava). Mpiatsaravelatsihy no manao izany hoy i Kristy. ὑποκριτής moa dia entina hilazana ny mpilalao an-dapihazo, miseho ho mpivavaka, nefa ny fiainany lavitra izany fivavahana izany.
Sao sanatria an’izany mbola mihatra amintsika ny fananaran’i Jesoa ka rehefa mahavita denier de culte sy mandrotsaka rakitra ho an’ny pretra sy ny fiangonana dia milamina ny konsiasy, ka na maty noana aza ny mpifanolo-bodirindrina, na hahantra eo aza ny raiamandreny dia tsy mampaninona satria efa nahavita ny adidy masina (Korban).
Tsy ho sanatria antsika anie ny hanao vavaka an-tendromolotra ka hanana fo manalavitra an’Andriamanitra (Izaia 29, 13gr). Tsy ambony na oviana na oviana noho ny Tenin’Andriamanitra sy ny didim-pitiavany ny fanajana izay mety ho tenin’olombelona sy fomban-dazana sy fomban-tany nifandovana. Tsy hanaovana tsinotsinona ny fomba sy ny soatohavina izany sanatria, fa fahamailoana kosa sao sanatria mifanipaka amin’ny fitiavana ny fiheverana ho fanajana azy ireny.
Alarobia faha-dimy mandavantaona
Alatsinainy faha-dimy mandavan-taona